#Burma Democratic Concern (BDC) မှ ဒါရိုက်တာ ဦးမျိုးထိုက်တန်သိန်းနှင့် မြန်မာသံတော်ဆင့်သတင်းဌာန ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့မှုများ « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Burma Democratic Concern (BDC) » #Burma Democratic Concern (BDC) မှ ဒါရိုက်တာ ဦးမျိုးထိုက်တန်သိန်းနှင့် မြန်မာသံတော်ဆင့်သတင်းဌာန ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့မှုများ
#Burma Democratic Concern (BDC) မှ ဒါရိုက်တာ ဦးမျိုးထိုက်တန်သိန်းနှင့် မြန်မာသံတော်ဆင့်သတင်းဌာန ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့မှုများ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Burma Democratic Concern (BDC) မှ ဒါရိုက်တာ ဦးမျိုးထိုက်တန်သိန်းနှင့် မြန်မာသံတော်ဆင့်သတင်းဌာန ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့မှုများ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Burma Democratic Concern (BDC) အနေဖြင့် မတ်လ(၁၀) ရက်နေ့တွင် လက်ပံတန်းမြို့ ပင်မကျောင်းသား သပိတ်ရှိ ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားများကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက နံပါတ်တုတ်များဖြင့် ၀င်ရောက် အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခြင်းနှင့် ကျောင်းသားသပိတ် ထောက်ခံ ဆန္ဒပြပွဲများအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အရပ်သား စွမ်းအားရှင်များသုံးပြီး အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခြင်းအပေါ် ပြင်း ထန်စွာ ရှုတ်ချကြောင်း ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကြေညာချက်တွင် အထူးသဖြင့် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေး သုံးစွဲထားသည်ဟု သံသယရှိဖွယ်ရှိသော ရဲများက လူနာတင်ကားမှန်း သိပါလျက် ကြက်ခြေနီဝတ်စုံ ၀တ်ဆင်ထားသည်ကို တွေ့ပါလျက် ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက မလွှဲမရှောင်သာ၍ အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းရသည်ဟု ပြောဆို ထားသော် လည်း ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် ဖမ်းဆီးခြင်း ခံထားရပြီး ပြန်လည် ခုခံနိုင်စွမ်း မရှိသည့် ကျောင်းသားတစ်ဦးကို အယောက် ၂၀ ဦးထက် မနည်းသည့် ရဲများက နံပါတ်တုတ်များဖြင့် ၀ိုင်းရိုက်ခြင်း၊ ကျောင်းသားသပိတ် ဖြိုခွင်းရန်အတွက် အသက်မရှိသည့် ကားကို သဲကြီးမဲကြီး အငြိုးတကြီး ပရမ်းပတာ ဖျက်ဆီးပစ်ခြင်း၊ ဘုန်းကြီးခေါင်း ကို ၀ိုင်းရိုက် နောက်မှ ပြေးကန်နေကြခြင်း၊ သတင်းထောက်များကို ကင်မရာ ကိုင်ခွင့်မပေးဘဲ သတင်းထောက် များ ကို နောက်မှ လိုက်ရိုက်ခြင်း၊ တာဝန်ဆိုသော လက်ပတ်ပတ်ထားသော အရပ်သား စွမ်းအားရှင်တွေသုံးပြီး ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားများကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရ သည်
မြန်မာနိုင်ငံရဲများ၏ အကြမ်းဖက်မှု၊ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်မှု၊ အင်အား အလွန်အကျွံ အသုံးပြုမှုများက အီးယူ အနေဖြင့် မြန်မာနို င်ငံရဲများကို အကြမ်းမဖက်ရန်၊ မရက်စက် မကြမ်းကြုတ်ရန်၊ အင်အားအလွန်အကျွန် အသုံးမပြုရန် ပိုမိုသင်ကြားပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြေ နကြောင်း ပါရှိခဲ့သည်။ ရဲများ၊ အာဏာပိုင် များ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု၊ အင်အား အလွန်အကျွန် အသုံးပြုမူများကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ပြီး တာဝန် ရှိသူများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူသွားရန် အလေးအနက် တောင်းဆို လိုက်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိခဲ့သည်။
ယင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းမှ ဒါရိုက်တာ ဦးမျိုးထိုက်တန်သိန်းနှင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့မှုများကို ကောက်နုတ် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မေး။ ။ ကျောင်းသားသပိတ်၊ အလုပ်သမား သပိတ်တွေ အပေါ်မှာ အစိုးရရဲ့ လက်ရှိ ဖြိုခွင်းမှုတွေဟာ ဥပဒေအရ တရားဝင်တယ်။ လက်ပတ်နီဝတ် အရပ်သားတွေ အသုံးပြုမှုဟာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ တရားဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်တယ်လို့ အစိုးရရဲ့ အကြီးတန်း အရာရှိကြီးတွေက ပြောနေပါတယ်။ ဒါကို ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။
ဖြေ – ပုဒ်မ ၁၂၈ ကို ပြောတာပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော် အဲဒီဥပဒေတွေကို လေ့လာ ကြည့်သလောက် ဗြိတိသျှခေတ် ကတည်းက အဲဒီတုန်းက ဥပဒေတွေကို လက်တစ်လုံးခြား ပြန်လည်ပြီး အသုံးပြု သွားတယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်။ တကယ့်တကယ် ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလိုဥပဒေမျိုးတွေ မရှိဘူး။ လက်ရှိ ကျွန်တော် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ နေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ စနစ်နဲ့သွားတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလို ဥပဒေတွေ မရှိပါဘူး။ အရပ်သားကို အရပ်သားက ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာ ဥပဒေ မဟုတ်ပါဘူး မင်းမဲ့စရိုက် ဆန်ဆန် လုပ်တာပါ။ တကယ်လို့သာ ဒီလိုမျိုး ဥပဒေပုဒ်မတွေသာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတယ်ဆိုရင် အမြန်ဆုံး ဖျက်သိမ်းပြီးတော့ ဒီမိုကရက်တစ် နည်းလမ်းကျတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ အမြန်ဆုံး အစားထိုး ပြုပြင်ပစ်ဖို့ လိုနေပြီလို့ ကျွန်တော် သတိပေးချင်ပါတယ်။
မေး။ အလုပ်သမားသပိတ်ကို စတင်ဖြိုခွင်းချိန်ကနေစပြီး မီဒီယာတွေကို ဖမ်းဆီးမှု၊ ရိုက်နှက်မှုကို စတွေ့ လာပါတယ်။ နောက်ဆူးလေ၊ လက်ပံတန်းတွေမှာ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေ လုပ်လာ ပါတယ်။ ဒါတွေကို ဥပဒေအရလို့ အစိုးရက သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာ ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ အစ်ကို့ ဝေဖန်ချက်ကို သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ – မီဒီယာတွေကို နှိပ်ကွပ်တာကတော့ လုံးဝ မှားယွင်းနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီကျင့်ဝတ်ကို လုံးဝ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်လိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာပေါ်က ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားတဲ့ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မီဒီယာတွေအပေါ် ရိုက်နှက် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခွင့်၊ ဖမ်းဆီးခွင့်၊ ပိတ်ပင်ခွင့်လုံးဝ မရှိပါဘူး။ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသက IS လို အကြမ်းဖက် သမားတွေကိုတော့ ထည့်မပြောဘူးပေါ့နော်။ ဒါကတော့ ရှင်းရှင်းကြီးပဲ အကြမ်းဖက် သမားကတော့ လုပ်မှာပဲ။ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရလို့ နာမည်ခေါ်ထားလို့ရှိရင် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေ၊ ကျင့်ဝတ်တွေကို လိုက်နာရမယ်။ စောင့်ထိန်းရမယ်။ အထူးသဖြင့် မီဒီယာကို ရှင်သန် ကြီးထွားအောင် ပျိုးထောင်ရမယ်။ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရလို့ နာမည်ခံထားပြီး မီဒီယာကို ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်းတွေဟာ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကနေ သွေဖည်နေပါတယ်။ ဒါလုံးဝကို မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စရပ်ကြီးတစ်ခုပါ။ ဒါလုံးဝကို ဆန့်ကျင် တားမြစ်ရမယ့် ကိစ္စတစ်ရပ်ပါ။
မေး။ ရွှေပြည်သာမှာ ဖမ်းတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ပြန်မလွှတ်ဘူး။ ဆူးလေက ကျောင်းသားတွေကို ၂၄ နာရီ အတွင်း ပြန်လွှတ်တယ်။ လက်ပံတန်းက ကျောင်းသားတွေကို ကျတော့ နေ့ညမဆိုင်း ရုံးထုတ်တရားစွဲဆို နေတယ်။ ဒီလိုမျိုး ရွှေပြည်သာ အလုပ်သမားသပိတ်၊ ဆူးလေဆန္ဒပြမှု၊ လက်ပံတန်းကိစ္စ ဒါတွေမှာ အစိုးရက လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အမျိုးမျိုးတွေကို သုံးနေတာ တွေ့ရတယ်။
ဖြေ – ဒါက ဘာကို ပြနေသလဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဥပဒေဆိုတာက လိုချင်သလို လုပ်လို့ရတယ်လို့ ပြောနေသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေက ဘာတွေကို ပြောနေသလဲ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဥပဒေစိုးမိုးမှု လုံးဝကိုမရှိဘူးလို့ သက်သေပြနေတယ်။ ဥပဒေဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံမှာ နှစ်မျိုးမရှိဘူး။ ဘယ်လိုအချိန်၊ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာမဆို တစ်သမတ်တည်း ဖြစ်နေရမယ်။ အခုဆိုရင် လက်ပံတန်း ကိစ္စက အငြိုးတကြီးနဲ့ လုပ်သလို ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် လက်နက် ဘာမှမပါတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေကို ရဲတွေက အငြိုးတကြီးနဲ့ ၀ိုင်းရိုက်နေတာတွေ့ရမယ်။ အသက်မဲ့တဲ့ ကားကိုတောင်မှ အငြိုးတကြီးနဲ့ ၀ိုင်းရိုက်နေတာ တွေ့ရမယ်။ ဒါတွေဟာ သပိတ် ဖြိုခွဲတာထက် အငြိုးတကြီးနဲ့ လုပ်တယ်လို့ တွေ့ရတယ်။ ရွှေပြည်သာ အလုပ်သမားသပိတ်ကို ဖြိုခွင်းတဲ့အခါကျတော့ အလုပ်သမားတွေဟာ ကျောင်းသားတွေလောက် အာရုံစိုက် မခံရတဲ့အခါကျတော့ သနားစရာကောင်းတဲ့ အလုပ်သမားတွေဟာ လိုသလို ဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ ဖိနှိပ် အနိုင်ကျင့်တာ ခံရတယ်။ နောက်မြို့တော် ခန်းမရှေ့မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စ ဒီကိစ္စတွေမှာ အရပ်သားအချင်းချင်း ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးစေတယ်ဆိုတာ လုံးဝကို မဖြစ်သင့်၊ မဖြစ်ထိုက်၊ မဖြစ်အပ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ အဓိကအချက်က ၃ ချက် ရှိပါတယ်။ ၃ ချက်မှာ ပထမတစ်ချက်က တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ အမိန့်ပေးသူ၊ အမိန့်ပေးခံရသူ ဆက်စပ်မှု အပြန်အလှန် ချိတ်စပ်မှုကြောင့် အီးယူအနေဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံရဲများအပြင် ဆက်စပ် တာဝန်ရှိသူများအားလုံး- ဥပမာ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးမှအစ တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်များအလယ် မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ အဆုံးအားလုံးကို ပြည်သူများ၏ ရပိုင်ခွင့်၊ လူ့အခွင့့််အရေး၊ အကြမ်းမဖက်ရန်၊ မရက်စက် မကြမ်းကြုတ်ရန်၊ အင်အား အလွန်အကျွံ အသုံးမပြုရန် သင်တန်းများ ပိုမိုသင်ကြားပေးရန် လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ မီးမောင်း ထိုးပြနေပါတယ်။ ဒုတိယ တစ်ချက်က အင်္ဂလန်လို နိုင်ငံမျိုးမှာ Independent Police Complain Comission ဆိုတာမျိုးရှိတယ်။ ရဲတွေရဲ့ မတရား လုပ်မှုတွေကို တိုင်ကြား စစ်ဆေးတဲ့ လွပ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို အဖွဲ့အစည်းမှာ ပြည်သူတွေ ယုံကြည် ကိုးစားတဲ့သူတွေ ပါဝင်တယ်။ အဲဒါက ရဲတွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ အဲဒီမှာဆို ပြည်ထဲရေးနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ ရဲတွေရဲ့မတရားမှုတွေကို စုံစမ်း ဖော်ထုတ်တဲ့ လွပ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တယ်။ ဒါမျိုး အဖွဲ့အစည်းတွေ လိုပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဥပဒေ အဟောင်းကြီးတွေကို အသုံးချပြီး ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်း မကျဘဲ ပြည်သူပေါ် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေတဲ့ ဥပဒေတွေကို ပယ်ဖျက်ဖို့ လိုနေပါတယ်။
မေး – ဒီလိုဖြိုခွင်းမှု၊ ရိုက်နှက်မှု၊ အရေးယူမှု၊ မီဒီယာတွေကို နှိပ်ကွပ်မှုတွေဟာ၂၀၁၅ အကြို ခြောက်လုံးတွေလို့ နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူတစ်ချို့က ဝေဖန်နေကြတယ်။ အစ်ကို့ အမြင်ကရော။
ဖြေ – ဒါကလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အယူအဆတစ်ရပ်ပါ။ အမြင်အမျိုးမျိုးတော့ မတူညီကြဘူးပေါ့။ အခု အဖြစ် အပျက်တွေက ဘာတွေကို ပြသသွားလဲဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းအတိုင်း သွားမနေပါဘူးဆိုတာ ပြသ သွားတယ်။ လက်ထဲမှာ အာဏာကိုလိုသလို အသုံးချနိုင်တယ် ဆိုတာကို ပြသွားတယ်။ သူတို့သည်းခံ နိုင်စွမ်း မရှိတော့ဘူး ဆိုတာကို ပြသသွားတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲကို အသုံးချပြီးတော့ တပ်မတော် ထိန်းသိမ်းမှ ဖြစ်မယ်။ မရှိမဖြစ် လိုတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ လုပ်ချင်တဲ့ သဘောရှိတယ်။
ရိုက်နှက်မှုတွေ၊ ဖျက်ဆီးမှုတွေ၊ လူထုအုံကြွမှုတွေ ဖြစ်လာအောင် ဖန်တီးပြီး ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းနဲ့အညီ မကျင်းပနိုင်အောင် လုပ်လာမလားလို့ သံသယတွေ ရှိလာပါတယ်။
မေး။ အစ်ကို့အနေနဲ့ ဖြည့် စွက်ပြောချင်တာများရှိပါသလား။
ဖြေ – မြန်မာနိုင်ငံမှ ရဲတွေ မတရားလုပ်မှု တိုင်ကြားရေး လွတ်လပ်သော အမြဲတန်းကော်မရှင် တစ်ခုကို ပြည်သူများ ယုံကြည်ကိုးစားသော ပုဂ်္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရန် လိုအပ်ပြီး ဤကဲ့သို့ရဲများ၏ အကြမ်းဖက် မှုများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူသွားရန် အရေးတကြီး လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြနေပါသည်။ ထို့အပြင် ဖိနှိပ်သော ဥပဒေများ ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီကျင့်ဝတ် ဥပဒေများဖြင့် အစားထိုးရေး လွတ်လပ် သောအမြဲတမ်း ကော်မရှင်တစ်ခုကို ပြည်သူများ ယုံကြည်ကိုးစားသော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး မတရား ဥပဒေများကို အာဏာပိုင်များ လက်တစ်လုံးခြား အသုံးမပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားရန် အရေးတကြီး လိုအပ် နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်း ထိုးပြ နေပါတယ်။
မြန်မာသံတော်ဆင့် . .သတင်းအမှန်- ဖော်ပြရန် အသင့်။ https://www.facebook.com/myanmarherald?fref=photo
Tags: Burma, Burma Democratic Concern (BDC), burmese, Myanmar, Myo Yan Naung Thein
By Burma Democratic Concern (BDC) in Burma Democratic Concern (BDC) on 18/03/2015 .
← #Myanmar needs “The Independent Police Complaints Commission” & “The Independent Law Reviewing Commission”	သင်္ကြန်တွင်း ဝတ်စားဆင်ယင်မှု နဲ့ အရက်သေစာသောက်စား မှု ဆွေးနွေးချက် →